Sajha keto 1616 days ago
Nas 1616 days ago
nozzs 1616 days ago
Nas 1615 days ago
dkhanal 1615 days ago
dkhanal 1612 days ago
Nas 1612 days ago
Nas 1611 days ago
Nas 1610 days ago
dkhanal 1610 days ago
atomic 1610 days ago
More by dkhanal
नासे ब्रो हेर्नुस त....
Visitor is reading नासे दाजु....
Visitor is reading New York Rapper Hot Music Video
Visitor is reading Room for rent 1-650, couple for- 850
Visitor from DE is reading can somebody name these species
Visitor from US is reading DV2010 Photo query
Visitor from NL is reading Help for Book
Visitor is reading Kim Jong um
[VIEWED 13745 TIMES]
Posted on 06-23-16 2:23 PM Reply [Subscribe]
हत्तेरी नासे दाजु...तपाई कि प्यारी ले गएको गीत सुन्नुस त...थुक्क....गधा कराको जस्तो पो छ त..हैट! :)
तपाईकी प्यारी पक्का शिमेल हुन पर्छ!
Posted on 06-23-16 4:37 PM [Snapshot: 152] Reply [Subscribe]
डिक सग कुरो मिल्यो है मेरो नि यो केसमा चै। के सारो मरिहत्ते गर्या होला नासे बोरो ले। काहाको नासे बोरो अनी काहाको डिक कै शब्दमा "पक्का शिमेल"
Posted on 06-23-16 4:48 PM [Snapshot: 143] Reply [Subscribe]
हा हा ! डि.के हनाल ब्रो ! तेती सारो नि नभंदिनुस न हौ ... मेरी प्यारी प्रियाँकाजीलाइ ! अब त्यो नाथे अनमोल जस्तो एकटिंग गर्ने नआउने हिरो बन्न सक्छ भने, मेरी प्यारीलाइ नि सिङ्गर बन्न दिनुस न ! बेसी आरिस नगर्नुस न !
अनि हमेशा मेरी प्यारी प्रियाँकाजीलाइ "गेडा पलायो" ,"शिमेल" जस्तो भन्नु भएर लान्छना नलगाईदिनुस न ! मेरो मन कति दुख्छ ... हनाल ब्रोलाइ के थाहा ! तपाईलाइ त् को केटि को केटा छुट्याउन नि आउँछ के ?
ल हेर्नुस तल कस्ती राम्री केटि छे ! तपाईले उहालाई नि फेरी केटा भन्न बेर लगाउन हुन्न ! तपाईको त् आँखै फुटेको !
Posted on 06-23-16 8:07 PM [Snapshot: 310] Reply [Subscribe]
हा हा हसौछ nas बुढोले नि, कता कता बाट् येस्तो वहियात वाहियात फोटो विडियो उठाउनु हुन्छ अनि तास्नु हुन्छ र मिथो सङ बक्वास कमेन्ट हान्नु हुन्छ नि म त मरि मरि हास्छु! वाहियात अनि बक्वास कमेन्ट र बक्लोल मन्छे भयेनी साझाको सेलिब्रेटी हो के नास बोरो, त्यो तोर्पे Anmol KC अनि Priyanka भन्दा थुलो सेलिब्रेती।
अनि यो विडियोमा priyanka जि को गायनको कुरो गर्दा चाहिँ ठिकै हो। रहर पूरा गर्दै छन, professional सिङेर त होइन फेरि हुन पनि सक्दैन, कस्तो कनि कनि गाको अनि आवाज पनि बेसि नक्कली नि मन्छे भन्दा बेसि।
Posted on 06-24-16 10:21 AM [Snapshot: 493] Reply [Subscribe]
साझाकेटो ब्रोले मेरी प्यारी भाउजुलाइ लगी हालिन .... लु डिकेहनाल ब्रो ... ब्रोको लागि भनेर मैले भाउजु खोजि ल्याए ! राम्री छिन नि होइन ?
Posted on 06-24-16 10:30 AM [Snapshot: 501] Reply [Subscribe]
थान्क यू नासे ब्रो...तेस्ती भाउजु तपाइँ नै राख्नुस मलाई चाहिदैन ...बरु अलि के वाई जेली नभए वेसलिन को स्टक डेरा मा राख्नु होला !
Posted on 06-24-16 3:55 PM [Snapshot: 614] Reply [Subscribe]
नोज्ज्स ब्रो को मिठो शब्दका लागि सहृदय धन्यवाद !
हाम्रा डि.के हनाल ब्रोलाइ मन नै परेन छ... ल ठिक्कै छ झन् कस्तो ठुलो ठुलो पोका मन पर्छ होला भनेर खोजि वरी लिआको त् ! .....
यिनी चै कस्तो लाग्यो त् हनाल ब्रो ? यिनी त् ठिक छ नि होइन ... धेरै राम्री नै छिन नि ..होइन र हनाल ब्रो !
Posted on 06-27-16 1:00 PM [Snapshot: 860] Reply [Subscribe]
थुक्क नासे दाजु..तिमि मुजी पनि अलि राम्रो राम्रो काण्डीडेट खोज न हो तिम्रो भाउजु को लागि...माथि पोको मुनि गुला भाको मात्रै खोज्छौ...माथि पोको मुनि दुला भाको खोज न हो !
Posted on 06-27-16 5:21 PM [Snapshot: 994] Reply [Subscribe]
मैले पोस्ट गरेको फोटोहरु त् केटिहरुकै हो भने ... हनालब्रोलाइ किन त्यो केटि.... केटाजस्तो लागेको ? लु हेर्नुस तल ...केटि नै हो भन्या ....
Posted on 06-28-16 5:12 PM [Snapshot: 1146] Reply [Subscribe]
हाइ रे ... डी.के ब्रोलाइ !
Posted on 06-29-16 9:59 AM [Snapshot: 1268] Reply [Subscribe]
ल ल डि.के ब्रोलाइ कुनै मन परेन छ ! तेसो भए एस्तो गर्ने भाउजु मन पर्छ त् तपाईलाइ ?
Posted on 06-29-16 10:04 AM [Snapshot: 1270] Reply [Subscribe]
मलाई त केकी भाउजु मन पर्यो ..कस्तो मोटाएर टमक्क परेकी गाठे ! :)
तेसो भए एस्तो गर्ने भाउजु मन पर्छ त् तपाईलाइ ?
तल गुलो नभए त ब्रो ले टासेको राम्री हो है! :)
Posted on 06-29-16 10:20 AM [Snapshot: 1293] Reply [Subscribe]
ए ! डि.के हनाल ब्रोलाइ नि मेरी भाउजु मोटाउँन भाकै राम्री लाग्नु भो ?
त्यो चै असली केटि नै हो डि.के ब्रो ! झन्डै झुकिन भएछ तपाई उनीसंग नि !
Posted on 06-29-16 2:29 PM [Snapshot: 1350] Reply [Subscribe]
ओहो नासे दाजु...कस्ती राम्री रैचिन यिनी त गाठे...अरु नि टाशुम न अलि तल नाइटो सम्मै देखिनी! :)
Posted on 06-29-16 5:03 PM [Snapshot: 1406] Reply [Subscribe]
फुल शर्ट लगाउदा राम्री
नाइटो देखौन्दा त् झन् राम्री
Posted on 06-29-16 5:19 PM [Snapshot: 1423] Reply [Subscribe]
गारो छ गारो ...
Posted on 06-29-16 6:39 PM [Snapshot: 1451] Reply [Subscribe]
के गारो छ एतोमिक ब्रो ?
Posted on 06-30-16 10:42 AM [Snapshot: 1615] Reply [Subscribe]
"शिमेल" भन्नु भाकोले मेरी प्यारी प्रियाँकाजीले मन दुखाउन भएछ !
थुक्क डि.के ब्रो !